ချစ်သူငယ်ချင်းမလေး ………… ရှယ်နိပ် ဖတ်ရူ့ပေးပါရှင့်။ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on November 29, 2020 Author admin	Comments Off on ချစ်သူငယ်ချင်းမလေး ………… ရှယ်နိပ် ဖတ်ရူ့ပေးပါရှင့်။
ဘဝမှာအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံး ငယ်သူငယ်ချင်းမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်… ထိုင်းမှာ ကျောင်းအတူတူတက်ကြတော့ ကျောင်းပိတ်ရက် တွေဆို သူနေတဲ့အဆောင်ကိုကျနော် သွားသွားလည်တတ်တယ်… တရက် သူ့အခန်းထဲမှာ သူ့စာတွေကူလုပ်ပေးပြီး စကားပြောနေတုန်း သူက ကျွန်တော့ဖုန်းကို ယူပြီးကြည့်တယ်… ကျနော်က စပန်းကင်း ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုတော့ ဖုန်းထဲမှာ စပန်းကင်းပုံ တွေ ဆေ့ ပြီးမမြင်အောင် လော့ လုပ်ထားတတ်တယ်… အဲ့နေ့ကျမှ မေ့ပြီး လော့ မလုပ်မိတာနဲ့ ဖုန်း ဂယ်လာရီ ထဲက ဂျပန်ကျောင်းသူလေး ဖင်ပြောင်ကြီးကို ကြိမ်စာ ကျွေးခံနေရတဲ့ ပုံတွေ တွေ့သွားရော… အဲ့ကျတော့မှ သူက လန့်ပြီး “ဟဲ့ နင့်ဖုန်းကလည်းဘာပုံကြီးတွေလည်း” ဆိုပြီး ထအော်ရော…။
ကျနော်ကလည်း ရှက်ရှက်နဲ့ ဖုန်းကို ပြန်လုပြီး “ဟီး ဟီး”ဆို ရီပြတာပေါ့… သူက ဖုန်းကို “ပေးစမ်းပါ ကြည့်ရအောင်” ဆိုပြီးအတင်ပြန်လုရော… ဖုန်းထဲမှာ ဂျပန်မလေးတွေ ဖင်လှန်ပြီး အရိုက်ခံနေရတဲ့ပုံ ငါး ပုံ ခြောက် ပုံလောက်ရှိတာ သူကသေချာကြည့်ပြီး “ဘာလို့ အရိုက်ခံရတာလည်း မသိဘူးတဲ့ ” ကျနော်က ” မလိမ္မာလို့နေမှာပေါ့” လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်… သူက “ဟီးဟီး ငါ့ကို လည်း ငါ့အမေက ခနခန ဖင်ချွတ်ရိုက်တာ” တဲ့ စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ပြောရော… သူက အဲ့လိုပြောတော့ အောက်က ကျနော့် ညီလေးက မတ်ကနဲ ထောင်လာတယ်… သူက အသားညိုညို ခါးသေးသေး ဖင်ကိတ်ပြီး ခန္ဓာကို အချိုးအစားတော်တော်လှတာ… သူဖင်လှန်ပြီး အရိုက်ခံနေရတဲ့ ပုံကို မြင်ရောင်ပြီး စိတ်ကထလာရော…။
ကျနော်က ထပ်သိချင်တာနဲ့ “အခုထိ အဲ့လို ရိုက်တာလား” လို့မေးတာပေါ့… သူ့အသက်က နှစ်ဆယ့်နှစ် နှစ်လောက်ရှိပြီး အဲ့အချိန်က… သူက အခုတော့မရိုက်တော့ဘူတဲ့ ပထမနှစ် စာမေးပွဲကျတုန်းက နောက်ဆုံး အရိုက်ခံရတာတဲ့…. ပြီးတော့ ကျနော့်ကို မေးတယ်… “နေပါဦး နင်က ဘာလို့ဒီပုံတွေ ဆေ့ ထားရတာလည်း” တဲ့… ကျနော်လည်း မထူးတော့ပါဘူး ဆိုပြီး ရိုးရိုးသားသားပဲ သူ့ကိုရှင်းပြလိုက်တယ်…။ “ငါက အဲ့ စပန်းကင်း ကို စိတ်ဝင်စားတာလေ အဲ့တာလည် လိင်စိတ်တစ်မျိုးပဲ” ဆိုပြီး သူ့ကို စပန်းကင်း အကြောင်းသေချာရှင်းပြတယ်… နောက် အဲ့လို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ အမျာကြီးရှိတဲ့အကြောင်း နိုင်ငံတကာမှာ ဆိုဒ် တွေ ဂရု တွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်း ပြီးတော့ ကျနော့်ရဲ့ လော့ လုပ်ထားတဲ့ ပုံ တွေ ဗွိဒီယို တွေပါ ပြပီး သူ့ကိုရှင်းပြတယ်…။
သူကလည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကျနော်ပြောတာ နားထောင်လိုက် ပုံတွေ ဗွိဒီယို တွေ ကြည့်လိုက်နဲ့… ပြီးမှ “ငါ ပထမနှစ်တုန်းက အရိုက်ခံရတုန်းကလည်း အပျိုလည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ အရမ်းရှက်တာ” ကျနော်က နင့်အမေက ဘယ်လိုရိုက်တာလည်းလို့မေးတော့ “ထဘီလှန်ခိုင်းပီး ကြက်မွှေးနဲ့ ရိုက်တာ ဆယ့်ငါးချက်လောက်ရှိတယ် နှစ်ပတ်လောက် ထိနာတုန်းပဲ ကောင်းကောင်းမထိုင်နိုင်ဘူး” တဲ့… သူကဆက်ပြောတယ် “အရိုက်ခံပြီး နောက်နေ့တွေကျတော့ မှန်နဲ့ ဖင်က အရှိုးရာတွေ ကို ကြည့်ပြီး လက်နဲ့စမ်းမိရင် စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုကြီးလည်း မသိဘူး ဟီးဟီး စိတ်လည်းမဆိုးတော့ဘူး”တဲ့… ကျနော်က “နင့်အမေက နင်ဒီမှာ ဆိုးတာတွေ မသိလို့ ကလပ်မှာမူးတာတွေ ပိုက်ဆံလိမ်တောင်းတာတွေ သာ သိရင် မလွယ်ဘူး” ဆိုတော့ သူက။
အမလေး ဖင်စုတ်အောင် အရိုက်ခံရမှာ တဲ့… နှစ်ယောက်လုံး ခန ငြိမ်သွားပြီး “ငါ နင့်ကို ရိုက်ချင်တယ်” လို့ ကျနော်က မေးလိုက်တယ်… သူက ကျနော့်ကို စိုက်ကြည့်ပြီး “အရမ်းနာအောင် ရိုက်မှာလား” တဲ့… ကျနော်က “နည်းနည်းတော့ နာမှာပေါ့ အရမ်းနာအောင်တော့ ငါလည်း မရိုက်ရက်ပါဘူး” လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်… သူက ကျနော့်ကို စိုက်ကြည့်နေတုန်း သူ့လက်မောင်းကို ဆွဲပီး ကျနော့်ပေါင်ပေါ် မှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်… ပြီးတော့ “ဂါဝန်လှန်မယ်နော်” လို့ပြောပြီး သူဝတ်ထားတဲ့ ညဝတ်ဂါဝန် အရှည်ကို ခါးအထိ ဆွဲလှန်လိုက်ရော… ငတိမလေးက အတွင်းခံတောင် မဝတ်ထားဘူးဗျ… ဂါဝန်လှန်လိုက်တာနဲ့ သူ့ဖင်ပြောင်ကြီး ပေါ်လာရော…။ ကျနော့်ပေါင်ပေါ်မှာ မှောက်ပြီး အရှေ့ကို ကုန်းထားတာဆိုတော့။
ဖင်လုံးကြီးကော ဖင်ကြားထဲက ဖင်ဝလေးရော အမွှေးကောက်ကောက်တွေနဲ့ အဖုတ်ကြီးရော မျက်စိရှေ့ အနီးကပ်ပဲဗျာ… ကျနော်က မိန်းကလေးတွေနဲ့ အိပ်ဖူးပေမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တခါမှ မရိုက်ဖူးဘူးဗျ… စပန်းကင်း ဝါသနာပါလို့ တစ်ယောက်ယောက်ဖင်ကို ရိုက်ကြည့်ချင်တာကြာပြီ… ဒါပေမယ့်အခု ဘော်ဒီလှလှ သူငယ်ချင်းမလေးက ကိုယ့်ပေါင်ပေါ်မှာ ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့ အရိုက်ခံဖို့ စောင့်နေတဲ့ အချိန်ကျတော့ ရိုက်ဖို့ထက် တခါတည်း တက်ပြီး လုပ်ပစ်ချင်စိတ်တွေကထန်လာရော… အောက်က ကောင်ကလည်းတအားတောင်နေတာ သူ့ဗိုက်ကို အတင်းထောက်မိနေလို့ အားတောင်နာတယ်… စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ သူ့ဖင်ပေါ်ကို လက်တင်ပီး ကြည့်နေမိတာနဲ့ သူက “နင်မရိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း တော်တော့ဟာ ငါရှက်လာပြီ” ဆိုပြီး ထမယ်လုပ်မှ။
ရိုက်မှာပါဟ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ပါဟ…. ဆိုပြီး သူ့ကျောကို သူမထနိုင်အောင်ဖိပြီး သူ့ဖင်ညာဘက်ခြမ်းကို ဖြန်း ဆိုတချက်ရိုက်လိုက်ရော… သိပ်တော့ အားမပြင်းပါဘူး… ပြီးတော့ နောက် ဘယ်ဘက်ဖင်ကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပြီး အားနည်းနည်းပိုထည့်ပြီး ရိုက်လိုက်တယ်… “ဖြန်း” “အ…” သူ့ဆီက အော်သံ တိုးတိုးလေးထွက်လာတယ်… ကျနော်က သူ့ဆံပင်ကို လှမ်းသပ်ပြီး သူ့မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်တယ်… သူမျက်နှာက ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဆိုမှ သူ့ဖင်အနှံ့ လက်နဲ့ သေချာပွတ်ပြီး ဘယ်ဘက်နဲ့ ညာဘက် ဖင်လုံးတွေကို တလှည့်စီ စည်းချက်မှန်မှန်နဲ့ ရိုက်ပါတော့တယ်… “ဖြန်း… ဖြန်း… ဖြန်း… ဖြန်း…” လေး ချက်မြောက် ရိုက်ချက်မှာ သူ့ဖင်လေး ကျုံ့သွားတော့ ခနနားပီး ဖင်ကို လက်နဲ့ပွတ်ရင်း နောက်ထပ်ခြောက်ချက်ထပ်ရိုက်ဦးမယ်။
ဖင်ကို ကျုံ့ မထားနဲ့နော် ပိုနာမယ် နောက်ဆို လိမ်လိမ်မာမာနေရမယ်နော် လို့ပြောတော့ “ဟုတ်” တဲ့… ပီးတော့ ဖင်ကို ဘယ်တစ်လှည့် ညာတစ်လှည့် ဆက်ရိုက်တာ… “ဖြန်း… ဖြန်း… ဖြန်း… ဖြန်း… ဖြန်း… ဖြန်း…” “အ… အ… အ… အား… အား… အား…” ရိုက်ချက်က ခပ်ပြင်းပြင်း… သူ့ဖင်နဲ့ကျနော့် လက်ဝါးနဲ့ ထိတဲ့ အသံနဲ့ သူ့ ခပ်ညည်းညည်း အော်သံနဲ့က စည်းချက်ညီညီ ထွက်လာတယ်… ရိုက်လို့ပြီးသွားတော့ သူ့ဖင်လေးက အနီရောင်လေးသန်းနေပီ… ။ သူက ဖင်ကိုပြန်မဖုံးပဲ ကျနော့် ခြေထောက်နား ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်တယ်… ပြီးတော့ ကျနော့်ကို မော့ကြည့်တယ်… မျက်နှာလေးက သနားကမားနဲ့ “နောက်ဆို မဆိုးတော့ပါဘူးနော်” တဲ့… ကျနော်က သူ့ဆံပင်လေးကို သပ်ပြီး “နင်က လိမ္မာပါတယ်” လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်… ။
သူ့လက်က တဖြည်းဖြည်း ကျနော့်ဟာပေါ် ရောက်လာပြီး “နင့်ဟာကြီးကလည်း အရမ်းထောက်ထားတာ ဗိုက်တောင်နာတယ်”တဲ့… ကျနော်က “ကြည့်မလားဟင်” ဆိုတော့ “အင်း” တဲ့… ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ဘောင်းဘီ ကိုချွတ်လိုက်တော့ ထောင်မတ်နေတဲ့ကျနော့် ဟာကြီးက သူမျက်နှာနဲ့ တည့်တည့်ပဲ… သူက “ဝါး နင့်ဟာကြီးက အကြီးကြီးပဲ” ဆိုပီး လက်နဲ့စုပ်ကိုင်ထားရော… ကျနော့် ဟာကို လက်နဲ့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေရင်းနဲ့ ရုတ်တရက် ပါးစပ်နဲ့ ငုံပစ်လိုက်တာ ကျနော်လည်း ရုတ်တရက်ဆိုတော့ အံ့သြသွားတယ်… သူက ကျနော့်ဟာကို တကယ့်ကို စိတ်ပါလက်ပါကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် နဲ့ စုတ်ပေးတယ်… အရမ်းကောင်းလာတော့ ကျနော်က “နင်စုတ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတာ ငါပြီးတော့မယ် လုပ်ချင်တယ်” လိုပြောပြီး သူကို ဆွဲထူ။
သူ့ဂါဝန်ကို လှန်ချွတ်ပြီး သူ့ကုတင်ပေါ်ကို ပက်လက်လှန် တင်ပီး လုပ်တော့တာပဲ…နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ကထန်နေတော့ ခပ်ပြင်းပြင်း စောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့ သိပ်မကြာဘူး အရည်တွေ ပန်းထွက်လာလို့ သူ့အထဲကနေ မြန်မြန်ထုတ်ပီး သူ့ဗိုက်ပေါ်ပဲ ပန်းလိုက်တယ်… ပြီးသွားတော့ ကျနော်လည်းသူ့ဘေးမှာပဲ လှဲပီးနေလိုက်တယ်…. သူကလည်း အားမရှိတော့တဲ့ပုံနဲ့ ကျနော့်ဘက်ကိုစောင်းပီး ကျနော့်ကိုခွရင်း လာဖက်ထားတယ်… ပီးတော့ “နင်လုပ်တာကောင်းလိုက်တာ နင်ရိုက်တာခံရတာရော နင့်ကိုစုတ်ပေးရတာရော နင်လုပ်တာခံရတာရော ကောင်းလိုက်တာဟာ” လို့ပြောတယ်… ။ ကျနေည်က သူ့နို့လေးတွေကို ကို ဖွဖွလေး ကိုင်ရင်း “အခုမှပဲ ရင်ဘတ်ကိုသတိရတော့တယ်” ဆိုတော့ သူက ရှက်သွားသလိုနဲ့ ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲကို ခေါင်လေးထည့်ထားပါတယ်…။
အဲ့တိုင်း ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်နေပြီး ကျနော်က “ရေချိုးရအောင်လေ ပြီးရင် ညစာသွားစားကြမယ်” ဆိုတော့မှ နှစ်ယောက်လုံး အတူတူရေချိုးပြီး ညစာထွက်စားကြတယ်… စားလို့ပြီးတော့သူ့ကို အဆောင်ပြန်လိုက်ပို့ရင်း ဆေးဝင်ဝယ်တယ်… သူ့အဆောင်ရှေ့ကိုရောက်မှ “ဆေးသောက်လိုက်နော်… ဖင်ကနာနေသေးလား…” ဆိုတော့ “မနာပါဘူး”တဲ့… ကျနော်က “ဒါဆို ပြန်တော့မယ်နော် စောစောအိပ်တော့နော်” ဆိုပြီး ကျနော့်အဆောင်ပြန်ခဲ့တယ်… အဆောင်ရောက်မှ ဖုန်းကိုကြည့်တော့ သူက “နင်ဒီနေ့တော်တော်ဆိုးတယ် နောက်နေ့ကျရင် နင့်ကို ရိုက်ရမယ်” ဆိုပြီး မက်ဆေ့ပို့ထားတယ်… အဲ့နေ့ကတစ်ညလုံးအိပ်လို့မရဘူး စိတ်ထဲမှာ ပျော်တာလိုလို ရင်ခုန်တာလိုလိုနဲ့… သူ့ရဲ့ဖင်ကိုရိုက်ရတဲ့အရသာ သူ့ကို လုပ်ရတဲ့အရသာတွေကို ပြန်ခံစားမိနေတယ်… မထင်မှတ်ဘဲ ဘဝမှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ချစ်သူငယ်ချင်းမလေးက ပေးခဲ့တာလေ…ပြီးပါပြီ။
ကိုဗဈကို ပေါ့ဆမိလို့ လူနာတငျကားပျေါမှာတငျ အသကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ အကွောငျး ပွောပွတဲ့ ဒေါကျတာခငျခငျကွီး ကိုဗဈနဲ့ပတျသကျလို့ ဒီရကျပိုငျးစိတျတှမေလနျးဘူး စိတျထဲဝမျးနညျးမိတာက ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက မူလတနျးကတညျးကငယျသူငယျခငျြး ဆယျတနျးအောငျပွီး ကြောငျးတှပေိတျတုနျးလဲ သငျတနျးမြိုးစုံအတူတူတကျခဲ့တဲ့သူငယျခငျြး ကိုဗဈကွောငျ့ သဆေုံးရတယျ ဘာလို့လဲ အိမျမှာသူ့အဖကေစဖြားတယျ ခြောငျးဆိုးတယျ ညီမလုပျသူက ဆေးရုံပို့မယျလို့ပွောတယျ သူကဆေးရုံမှာလဲ လူတှမေနိုငျဘူး ကပျြညှပျနတောပဲ ရောဂါကသိပျမဆိုးပါဘူးဆိုပွီး ပေါ့တှကျမိတယျ အိမျမှာပဲထားတယျ နောကျရကျသူပါ ဖြားလာတယျ ခြောငျးဆိုးလာတယျ နောကျတခွားသူတှကေ သိသှားတော့ မဖွဈဘူး ဆေးရုံပို့မှဆိုပွီး လုပျကွတယျ ဆေးရုံကားပျေါမှာ သူနောကျဆုံးပွောသှားတာက ငါကိုဗဈဖွဈပွီထငျတယျဆိုတဲ့ စကားပဲ အငျးစိနျဆေးရုံမရောကျခငျ ကားပျေါမှာပဲ အသကျဆုံးပါတယျ တကယျ့ကို နှမြောစရာဖွဈပါတယျ သပွေီးမှ ဓာတျခှဲ နမူနာယူပွီး စဈရတာ positive ထှကျပါတယျ သူ့အဖကေကတြော့ အငျးစိနျဆေးရုံမှာ ပွညျ့နလေို့ […]
ပင်ပန်းမှုဒဏ်မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံး ခြေပစ်လက်ပစ်လဲချလိုက်ကြတဲ့ သူရဲကောင်းများ😪 အားပေးစကားလေး ပြောပေးသွားပါ
မှာယူထားတဲ့ ကိုဗစ်ကုသဆေးတွေ ရောက်တော့မည့်အကြောင်း ဝမ်းသာအားရ အသိပေးလာတဲ့ ဂျွန်လွင်
မျောဒယျလျလောကရဲ့ဖခငျကွီးလို့ ချေါဝျေါကွတဲ့ ဂြှနျလှငျကတော့ လိုအပျတဲ့နရောတိုငျးကို လကျ နှေးကူညီတတျသူတဈယောကျမို့ ပရိသတျတှလေေးစားခဈြခငျနရေသူပါ။ အကွငျနာတရားထှနျး ကားရေး ဆောငျပုဒျလေးကို အမွဲလကျကိုငျထားပွီး လိုအပျနသေူတှကေို ကူညီပေးခဲ့ရုံမက ကိုဗ ဈ ပထမလှိုငျးမှာလညျး ခကျခဲဒုက်ခရောကျနသေူတှကေို ဆကျတိုကျဆိုသလို လှူဒါနျးပေးခဲ့ပါသေး တယျ။ ယနမှေ့ာတော့ ဂြှနျလှငျက ကိုဗဈရောဂါကုသရေးအတှကျ အသုံးပွုခှငျ့ပေးထားတဲ့ တဈလုံးကို (၂၄) ဒျေါလာတနျကွေးရှိတဲ့ Remdesivir ဆေး အလုံး(၇၉၀) ကို ပွညျသူနဲ့အတူလှူဒါနျးကွမ ယျအလှူလကျကနျြငှေ (၂၅၄) သိနျးနဲ့ ဝယျယူခဲ့ပွီး ဒီနနေို့ဝငျဘာ(၂၅) ရကျနမှေ့ာ ရောကျလာ တော့ မှာဖွဈကွောငျး သတငျးကောငျးလေးကို မြှဝပေေးခဲ့တာပါ။ ဂြှနျလှငျက ကြှနျတျော့တို့ပွညျသူနဲ့အတူတူလှူကွမယျအဖှဲ့ ကအလှူငှလေကျကနျြ254 သိနျး မှ ဝယျယူလှူတနျးမယျ့Covid 19 အဆုတျခဲသကျသာစတေဲ့ဆေးRemdesivir တလုံး 24 U$ ဖွဈ […]
အီဆိမ့်အောင်ကောင်းလှသည် …………… ရှယ်နိပ် ဖတ်ရူ့ပါရန်။